Jammin´ ite 2 nyochaa (RTP: 96.4%) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Jammin´ ite 2 nyochaa (RTP: 96.4%)
Site na nje na-efe efe nke Jammin ‘ite nwere ike ime, Push Gaming wepụtara usoro ya Jammin’ ite 2 ka ọ gaa n’ihu na-ebupụta ihe nketa ya. Site na ntanetị 8 × 8, oghere a dị egwu juputara na mkpokọta isiokwu sitere na ebe okpomọkụ, ụlọ ọgbakọ ọhụrụ, ruo oghere mkpụrụ osisi na Miami vibes. Nke a na egwuregwu nwere a ụyọkọ play arụzi ụgbọala na 96.40% nke nwere ike inye gị a kacha payout uru 50,000x gị osisi.
Regha: 8Rows: 8RTP: 96.4% Min nzọ: £ 0.1Max nzọ: £ 100Paylines: Cluster PaysMax win: 50,000x
Jammin ‘ite 2 oghere oghere
Ọ BR game na egwuregwu mbụ Jammin ‘Jars ghọrọ ihe na-ebuli ọnọdụ ozugbo, Push Gaming gbara mbọ hụ na Jammin’ Ololo 2 nwere ike ịme ya. Aha ntinye aha a nwere otutu njiri mara mma. Ọ nwere ngwakọta nke mkpụrụ osisi oghere na ọkụ neon na-acha ọkụ na DJ. N’ezie, Jammin ‘Ogwe 2 nwekwara ngwakọta nke isiokwu ịgba egwu iji nye ikpe ziri ezi na onye isi ya.
N’ozuzu, oghere a dị ka oghere mkpụrụ osisi a kpara nke ọma na ntụgharị. Yabụ, na-atụ anya ịhụ mkpụrụ dị iche iche na grid dịka mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, watermelons, tomato, painiapulu, na pọmigranet. Enwekwara jam ite na ihe nkiri vinyl ọla edo na ntanetị.
Jammin ‘ite 2 atụmatụ
Jammin ‘Ogwe 2 jupụtara n’ọtụtụ atụmatụ na 8 reels na ahịrị 8. Njirimara ndị a gụnyere ezigbo usoro cascade, akara vinyl, akara ngosi ngbanye oge, ọgbụgba mkpụrụ osisi, na ndị ọzọ. Iji weghachite ihe omume mara mma na nke na-akpali akpali na egwuregwu nke ụdị mbụ ya mere, ka anyị lelee atụmatụ ndị a.
Cascading Enwee Mmeri Mechanic
Akụkụ mbụ dị mfe ịchọpụta na Jammin ‘Jars 2 Slot bụ Cascade System. Igwe ọrụ a na-ewepu ụyọkọ mmeri niile site na ntanetị. Nke a na – eme ka ụzọ maka akara ngosi ọhụụ na nke dị ugbu a weghara ntụpọ niile. Zọ a, ohere gị mepụta ụyọkọ mmeri ga – abawanye. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị n’akụkụ gị, nke a nwere ike inye gị ụyọkọ mmeri n’otu oge.
Iji nweta ụfọdụ nwa anụmanụ, ị kwesịrị adaa 5 ma ọ bụ karịa-acha anụnụ anụnụ ozugbo na-agbata tiles. Nke a na – eme nchikota mmeri site na ịdata na taịl nile na-acha anụnụ anụnụ na grid yiri akara ndị nkịtị. Agbanyeghị, naanị ihe dị iche bụ na ha na-agbakọta ọnụ ọgụgụ taịl nile iji chọpụta ihe nrite ị meriri.
Ozugbo 5 ma ọ bụ karịa nke akara ndị a dakwasịrị ibe ha, agba akara ndị ahụ na-acha odo odo ma na-enye ụkpụrụ ha metụtara. Ọzọkwa, uru nke ihe nrite ozugbo na-agbanwe site na 1x ruo 1,000x osisi gị dabere na taịl nile dị ugbu a. N’agbanyeghị nke ahụ, ohere ị ga – enweta taịlị nke bara uru karịa 100x osisi gị dị obere.
Ọ bụrụ na ị maara ụdị nke mbụ nke egwuregwu a, ị ga-achọpụta na atụmatụ Mkpụrụ Mkpụrụ ahụ maara. Ọ bụ n’ihi na atụmatụ a yiri nke egwurugwu atụmatụ nke nwere ike ịkpalite enweghị usoro mgbe emere atụmatụ Cascade.
Otu nhazi nhazi ga-arụ ọrụ ya na ntanetị mgbe Giga Jar DJ gbara 1 ka mkpụrụ osisi atọ buru ibu. Mkpụrụ ndị a na-efesasị ma na-agbapụta ụyọkọ mmeri na akara akara.
Iji banye na Ego Daashi, ịkwesịrị ịdabata opekata mpe akara atọ anụ ọhịa na otu ntụgharị. Kpalite Bonuskwụ Bonusgwọ ahụ ga-akwụ gị ụgwọ 6 Bonus Spins mgbe Oghere Ọhịa nke kpatara atụmatụ ahụ na-anọgide na-adị. Ogwe osisi ndị a dị adị na-awụli elu n’ọkwá ndị ọhụrụ na -adị mgbe ọ bụla ha tụgharịrị. N’otu oge ahụ, Multipliers ha na-etinye aka na-abawanye site na 1 oge ọ bụla etolite ụyọkọ mmeri.
Oge ọ bụla akara vinyl ọla edo na-apụta na wiil, Giga Jar DJ na-anakọta ha site na ntanetị. The DJ Jar nwere ọkwa 5 nke ị nwere ike iru mgbe ịnakọchara akara vinyl ọla edo zuru ezu iji kwalite RTP.
Ọkwa 1 = setịpụrụ 96.10% RTP. Ikwesiri ichikota akara vinyl 20 iji kwalite nke a na ọkwa 2Level 2 = setịpụrụ 96.20 RTP. Ikwesiri ichikota akara vinyl ọla edo 25 iji kwalite nke a na ọkwa 3Level 3 = setịpụrụ 96.30% RTP. Ikwesiri ichikota akara vinyl ọla edo 30 iji kwalite nke a na ọkwa 4Level 4 = setịpụrụ 96.40% RTP. Kwesịrị ịnakọta akara ngosi vinyl ọla edo 35 iji kwalite nke a na ọkwa 5
Ozugbo ị ruru larịị 5, ị ga-enweta ohere iji rụọ ọrụ Giga ite. N’aka nke ọzọ, atụmatụ Giga Jar enweghị ike ịkpalite na-akpaghị aka naanị n’ihi na ị ruru ọkwa 5. Kama, enwere ike ịkpalite ya na enweghị usoro na ọkwa 5 iji kpochapụ grid ozugbo ị chịkọtara diski. The Giga Jar DJ, na-agbakwunye 3 ka 4 Wild ite akara na esi anwụde.
Ka ọ dị ugbu a, DJ Giga Jar na-egosi nha dị iche iche dị iche n’etiti 2 × 2, 3 × 3, ma ọ bụ 4 × 4 dị ka ngọngọ ngwa ngwa. Ọzọkwa, ị ga-enweta 8 Giga Spins na akara ngosi niile dị ugbu a na akara ngosi ka ekpochichara na atụmatụ ahụ. Dị ka ọ na – eme kwa oge ọ bụla, Ogwe Ọhịa na-arụ ọrụ n’otu ụzọ ahụ ka akara ngosi nrite ozugbo na-enye 1 ma ọ bụ 2 Bonus Spins.
Jammin ‘ite 2 RTP, ịkụ nzọ na onyinye
N’ihe banyere ịkụ nzọ, Jammin ‘Jars 2 na-enye nzọ dị iche site na 10 0.10 ruo £ 100 kwa ntụgharị. Dị nnọọ ka ọtụtụ oghere sitere na Push Gaming, Jammin ‘Jars 2 bụ egwuregwu dị egwu nke jupụtara na egwuregwu egwuregwu dị egwu. Yiri egwuregwu gara aga, nwekwara ike iburu gị gaa n’ụgbọ mmiri na-atọ ọchị nke nwere ike ịnwe nnukwu ohere mmeri.
N’ọtụtụ ọnọdụ, nke a nwere ike ịbịa mgbe otu ihe egwuregwu na-arụ ọrụ. Site n’enyemaka nke onyinye ya ozugbo, ọbụnadị egwuregwu egwuregwu nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ dịka Daashi Round. Site na ndabara, Jammin ‘Jars 2 nwere otu RTP nke edobere na 96.40% nke dị ala ma e jiri ya tụnyere nke mbụ ya. Ka o sina dị, a ka na-ele RTP a anya dị ka nke zuru ezu iji nye ezigbo ụgwọ.
Iji nweta mmeri, naanị ị ga – adọta akara ngosi 5 ma ọ bụ karịa dabara na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị. Ndi Multipliers nwekwara ike inye aka bulie ihe mmeri gi nke nwere ike iru 50,000x osisi gi.
Kedu ihe bụ RTP na oghere Jammin ite 2?
Oghere Jammin 2 Oghere nwere 96.4% RTP, nke dị ntakịrị karịa na akụkụ mbụ nke nsonaazụ.
Kedu ndị na-eweta egwuregwu wepụtara Jammin ite 2?
Jammin ite 2 si Push Gaming.
Gịnị bụ volatility na Jammin ite 2?
Jammin ite 2 nwere nnukwu volatility.
Dị ka egwuregwu na-aga n’ihu, Push Gaming mere ezigbo ọrụ na ịmepụta Jammin ‘Jars 2. Egwuregwu a weghachitere ihe ọma niile dị na egwuregwu mbụ iji mee mkpọtụ ọzọ n’ahịa. Jammin ‘ite 2 jisiri ike nye ihe omume na-atọ ụtọ ma mara nke egwuregwu mbụ wee mee ka ọ nwụọ. Ọbụna ndịna eserese ya na ọdịyo dị na isi. DJ n’onwe ya na-ekere òkè dị mkpa na egwuregwu ahụ.
Otú ọ dị, ọ dịghị nkwa ọ bụla na ị ga-arụ ọrụ Giga ite na-akpaghị aka mgbe ị rutere ọkwa 5 nke na-akụda mmụọ. Yabụ, ọ bụ ihe dị mma na inyekwu onyinye nwere ike ịrata gị ma nyere aka mee ka mmeri gị kawanye mma.
Tags:ite Jammin nyochaa RTP
Gonzo’s Treasure Hunt bụ ihe ngosi jupụtara na ya, nke …